Global Voices teny Malagasy » Nahataitra ireo mpampiasa Twitch ny nahita ny Ben’ny Tanàna tao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Mey 2021 17:17 GMT 1	 · Mpanoratra Arzu Geybullayeva Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tiorkia, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora
Bir anda, Twitch'te! 😅@ekrem_imamoglu  pic.twitter.com/SvnJP7xcnb 
Ny Twitch dia sehatra fandefasana mivantana, ireo mpilalao no tena mpampiasa be indrindra azy—saingy tsy amin'izany ihany. Marobe amin'ireo “casters ” no mampiasa ilay sehatra mba handefasana ny lalaon-dry zareo na ny hetsika ataony amin'ny alalan'ny fizaràna ireo fàfana ho hitan'ny mpankafy azy ireo sy ireo mpanjohy. Politisiana iray be mpahalàla ary mpampiasa ny Twitch ilay mpiondana media sôsialy, Alexandria Ocasio-Cortez  (AOC), tahàka an'i Bernie Sanders  rahateo. Ao Tiorkia, nandray anjara  tamina resadresaka iray nivantana tao amin'ny Twitch ny Ben'ny Tanànan'i Ankara renivohitra, fa nandeha lavidavitra kokoa noho izay i İmamoğlu tamin'ny nanokafany ny kaontiny manokana mba hahafahany miserasera amin'ny eny ifotony bebe kokoa.
Namaly ireo Bits avy amin'i İmamoğlu ireo mpisera, tamin'ny voalohany tao anatin'ny tsy fahatokisana hoe tena ny Ben'ny Tanàna tokoa ve io. Harena virtoaly ny Bits, ampiasaina ao amin'ilay sehatra, azo vidiana ary manome tanjaka mampahery sy anehoana fanohanana an'ireo ‘streamers’, hoy ny lazain'ny FAQ  ao amin'ny Twitch. “Ny Cheering amin'ny alàlan'ny Bits dia mampiseho fanohanana an'ireo streamers ary mankalaza ireo fotoana tianao miaraka amin'ilay vondrom-piarahamonina, avy hatrany ao amin'ny ‘chat’ (fifampiresahana mivantana). Ny Cheer dia fifampiresahana amin'ny alàlan'ny hafatra mampiasa ny Bits. Afaka ampiasiana tsirairay ireo sarikely fanehoana fihetsehampo (Bits emotes), miaraka, na aiza na aiza eo anelanelany eo. Ny fampiasàna azy marobe indray miaraka dia fanehoana fanohanana bebe kokoa ary mamorona sarikely mihetsika mahafinaritra kokoa.”
Ny fisehoana voalohany nataon'i İmamoğlu tao amin'ilay sehatra dia nifanandrify tamin'ny fety iray ao amin'ny firenena, nataony hankalazana ny tanora sy ny fanatanjahantena, ka tamin'izany ny Ben'ny Tanàna dia niditra tamin'ny fotoana fametrahana sy famaliana fanontaniana mivantana  momba ny tontolon'ny aterineto tiorka.
Tamin'ny Martsa 2019 i Ekrem İmamoğlu  no voafidy ho Ben'ny Tanànan'i Istanbul. Tany aloha, Ben'ny Tanànan'ny distrikan'i Beylikduzu ity politisiana 50 taona ity, saingy zara raha nisy nahalàla  ny anarany talohan'ny nirotsahany tamin'ny fifidianana tamin'ny Martsa 2019. Ny antoko mitondra, Rariny sy Fandrosoana (AKP), dia nangataka  fanafoanana ireo vokatra, tamin'ny filazàna fa nisy hosoka ny fifidianana. Ny Jona 2019, anefa, azon'i İmamoğlu ny fandresena tamin'ny famerenana ilay fifidianana, tamin'ny elanelan'isa marobe, namarana ny 25 taona nanjakan'ny antoko Rariny sy Fandrosoana tao Istanbul.
Tsy mahagaga ny lazan'ny ben'ny tanànan'i Istambul eny anivon'ireo tanora. Ho an'ny mpampahalala vaovao sasany ao an-toerana , fifidianan'ny “Andiantaranaka Z” iny, izay nampitombo be ny isam-bato tamin'ny famerenana ilay fifidianana, nitondra an'i İmamoğlu tamin'ny fandresena fanindroany. Io Andiantaranaka io, teraka teo anelanelan'ny 1995 sy 2010, dia tsy nahafantatra  Tiorkia hafa ankoatra ny teo ambany fitondràn'i Recep Tayyip Erdogan sy ny antokony. Hatrany hatrany, tsy nahomby ireo ezaky ny filoha Erdogan hanefy ny andiantaranaka tanora ao Tiorkia. Ny hetsipanoherana akaiky indrindra  izay nanozongozona an'ilay oniversite Bogazici manana ny lazany ao Istambul no porofon'izany. Talohan'izay, anefa—nanomboka hatramin'ireo hetsipanoherana tao Gezi  tamin'ny 2013—nihena ny fitiavan'ny olona ny antoko, indrindra fa teny anivon'ny tanora. Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny Ivontoerana Gezici Arastirma Merkezi  tamin'ny 2020 dia 76,4 isanjato tamin'ireo namaly no nilaza fa toy ny laharam-pahamehana ho an'i Tiorkia no fahitàn-dry zareo ny tany tàn-dalàna sy ny demaokrasia—izy roa ireo samy nodinihana teo ambanin'ny fitantanana amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny taona lasa , an-jatony maro ireo mpianatra nanaraka ny resaka mivantana niarahana tamin'ny filoha Erdogan ary nampiasa ny faritra natao hanehoana hevitra mba hanakianan'izy ireo an'i Erdogan sy hitenenana taminy fa tsy hanome vato azy izy ireo amin'ny fifidianana manaraka eo hifidianana izay ho filoha, voalahatra ho amin'ny  2023. Novinavinaina  hoe hisy mpifidy miisa 6 tapitrisa vaovao hanome ny vaton'izy ireo amin'ny fifidianana manaraka eo.
Vao haingana, tanaty antsafa iarahana tamin'ny Fox TV Tiorkia, nilaza  i İmamoğlu fa tsy nanana eritreritra ny hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena izy amin'ny ho avy fa kosa, tanjony ny ho Ben'ny Tanàna nahavita be ho an'i Istambul. Tsy miankina amin'izay ho firotsahany, fa toa efa babony ireo andiantaranaka afaka hanokatra làlam-baovao ho an'i Tiorkia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/23/152795/
 May 19, 2021: https://twitter.com/gonulluist/status/1395074714725400583?ref_src=twsrc%5Etfw
 Alexandria Ocasio-Cortez: https://www.bbc.com/news/technology-54630330
 Bernie Sanders: https://www.theverge.com/2019/8/15/20804614/bernie-sanders-twitch-presidential-campaign-gamers-streaming-donations-streamlabs-fec
 nandray anjara: https://www.turkishminute.com/2021/03/18/ankara-mayor-broke-national-twitch-record-with-362k-live-viewers-on-stream/
 fotoana fametrahana sy famaliana fanontaniana mivantana: https://www.twitch.tv/videos/1028069172
 May 19, 2021: https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1395051670992793602?ref_src=twsrc%5Etfw
 Ekrem İmamoğlu: https://en.wikipedia.org/wiki/Ekrem_%C4%B0mamo%C4%9Flu
 zara raha nisy nahalàla: https://www.bbc.com/news/world-europe-48739256
 dia nangataka: https://www.reuters.com/article/us-turkey-election-idUSKCN1RS19L
 mpampahalala vaovao sasany ao an-toerana: https://www.duvarenglish.com/politics/2020/06/30/turkeys-generation-z-will-be-difficult-to-win-in-2023-elections-say-experts
 hetsipanoherana akaiky indrindra: https://globalvoices.org/2021/02/04/protests-rock-istanbuls-most-prestigious-university-over-appointment-of-new-rector/
 hetsipanoherana tao Gezi: https://globalvoices.org/2014/12/14/gezis-echo-and-the-battle-for-public-spaces-in-turkey/
 Gezici Arastirma Merkezi: https://twitter.com/geziciarastirma?lang=en
 Tamin'ny taona lasa: https://foreignpolicy.com/2020/07/15/turkey-youth-education-erdogan/
 voalahatra ho amin'ny: https://www.jamesinturkey.com/turkeys-next-election/